စုပ်ယူနိုင်သော Cotton Ball၊ တစ်ခါသုံးဆေးထုပ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ - Zhongxing
တစ်ခါသုံး Mask သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်...
တစ်ခါသုံး Sterile Fliter Mask Self-suction fil...
Gauze Pads gauze swabs medcial steriole 8 ply 1...
Gauze Cotton ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ခန်း ပိတ်ကျဲစ အဖြူ...
Item Gauze Bandage Material Gauze Certificate CE...
Gauze Swabs များကို 100% အရောင်ဖျော့ထားသော ချည်ဂွမ်းစဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။၎င်း၏ ...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဝင် ကော်ပရက်စ် Cotton Gauz...
တခါသုံး ချည်ထည်၊ ဇီဝပိုးသတ်နိုင်သော အီကိုဖရေ...
တခါသုံးဆေး Cotton Ball Sterile 100%...
Clip Cap ဖြင့် တစ်ခါသုံး ဆေးထုပ်များ
ZHONGXING China သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တခါသုံးပစ္စည်းအတွက် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး...
တစ်ခါသုံး ဆေးကုတင် အိပ်ယာခင်း ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အမိုးအကာများ...
ZTE အဖွဲ့၏ စိတ်ဓာတ်ကို အားကိုးပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း အရောင်းလုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးကို ဖန်တီးပါ။
သမာဓိနှင့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု၊ အကောင်းမြင်မှုနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ၊ စည်းလုံးမှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
အပြုသဘောဆောင်သော၊ သစ္စာရှိမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး ရိုးသားသော၊ စိတ်နှလုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှု။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာရှင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကုန်ပစ္စည်းများထံ ကိုးကားချက်များပါရှိသည်။ ဤထုတ်ကုန်များသို့ လင့်ခ်များကို သင်နှိပ်လိုက်သည့်အခါ လျော်ကြေးငွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သက်ရောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာမူဝါဒများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤစာမျက်နှာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ဗြိတိသျှ ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအသက်ရှူကိရိယာစျေးကွက် 2022၊ အဓိကကစားသမားများ၊ ဒေသများ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အသုံးချမှုများအားဖြင့်၊ 2028 အထိခန့်မှန်းချက်
MarketsandResearch.biz လေ့လာမှုသည် 2022 မှ 2028 ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုအသက်ရှူကိရိယာစျေးကွက်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လက်ရှိနှင့် သမိုင်းဝင်စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုတွင် စျေးကွက်သုံးသပ်ချက်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် အသုံးချမှုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ပမာဏနှင့် တန်ဖိုးအရ စျေးကွက်ကို အက်ပ်ဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။ ...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဝင် ချည်ထည် ပိတ်ပါး
ပိတ်စများကို စက်ဖြင့် ခေါက်ထားသည်။ချည်သားစစ်စစ် 100% ချည်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို နူးညံ့ပြီး တွယ်ကပ်စေပါသည်။သာလွန်ကောင်းမွန်သော စုပ်ယူနိုင်မှုကြောင့် pads များသည် သွေးတွင်းရှိ exudates များကို စုပ်ယူရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား pads, Su ...
Face Mask3လွှာ တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဝင်မျက်နှာဖုံး
သုံးလွှာ filtration ဒီဇိုင်း ယက်မဟုတ်သောထည်၊ အရည်ကျိုထားသော bolwn ထည်၊ စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အရေပြားနှင့် လိုက်ဖက်သော ယက်မဟုတ်သော အနားသားကို စတင်အသုံးပြုပါ ချစ်တို့ရေ...
တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ပလတ်စတစ်နှာခေါင်းဘားနှင့် နှာခေါင်းညှပ်များအားလုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မတူညီသောမျက်နှာအမျိုးအစားအလိုက် သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးချိန်ညှိနိုင်သည်။အတွင်းဖုံး ultrasonic အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ခြင်းကို ရွေးချယ်ထားပြီး နားခါးပတ်...
ကုမ္ပဏီသည် Jiangsu ပြည်နယ် 33-8 Shanyang Avenue၊ Huaian Economic Development Zone တွင် တည်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ယွမ် သန်း 50 ကျော်ရှိသည်။ကုမ္ပဏီသည် စျေးကွက်ကိုဦးတည်သော၊ ဖောက်သည်ဗဟိုပြုသည့် စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်၊ ရှင်သန်ရန်အရည်အသွေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကို အားကိုးကာ၊ ဝန်ဆောင်မှုစံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတစ်လျှောက်လုံး တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် စျေးကွက်ကိုဦးတည်ကာ၊ အရောင်းအပြီးထိန်းသိမ်းမှု၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဖောက်သည်များက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းယုံကြည်ထားသည့် “မူးယစ်ဆေးဝါးကြီးကြပ်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး” နှင့် အခြားအဆင့်မြင့်အာဏာပိုင်များကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီး “ယဉ်ကျေးသောတစ်ခုတည်းသောယုံကြည်မှုလုပ်ငန်း၊ လေးလံသောစာချုပ်နှင့် အကြွေးယူနစ်များ” နှင့် အခြားဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းများ,